ဒေါက်တာ ညီညီကျော် – Good Health Journal
Tag: ဒေါက်တာ ညီညီကျော်
ဆနွင်းမှုန့်လို့ပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ မြန်မာ လူမျိုးတွေ နဲ့ မစိမ်းတဲ့ ပာင်းခတ် အမွှေးအကြိုင် တွေထဲက တစ်မျိုးပါ။ နေ့တိုင်းစားနေပေမယ့် သူက ဘယ်လောက်တောင် အကျိုးကျေးဇူးရှိနိုင်လဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် တို့ ကိုယ်တိုင် အမှု့ မဲ့ အမှတ်မဲ့ ဖြစ်နေတာပါ။ အခုတော့ သုတေသန စာရွက်စာတမ်း တွေ နဲ့ တကွ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေ ခိုင်ခိုင်မာမာ တွေ့ရှိလာတဲ့ အတွက် အားလုံးဂသိရှိနိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆနွင်း ဘယ်က ရလဲ ဆိုတာ ကနေစပါမယ်။ ဆနွင်း က ဆနွင်းပင်ဆိုပြီးတော့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အာရှတိုက် က လူမျိုးစုတွေ အတွက် က တော့ ဆနွင်း ကို အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးစရာတောင် […]
Posted in: ArticleTagged: ဒေါက်တာ ညီညီကျော်LeaveacommentGood Health Journal	 January 8, 2018
ဆားများသော အစားအစာများ ကျွေးခြင်းမှ ရှောင်ပါ။ ကလေးငယ်တွေ ကို ဆားများတဲ့ အစားအစာတွေ မကျွေးသင့်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆားအရမ်းများရင် သူတို့လေးတွေ ရဲ့ကျောက်ကပ်အတွက် မကောင်းပါ။ ဆားများတဲ့ အစားအစာဆိုလို့ ငါးပိတို့ ငါးခြောက်တို့ကိုပဲ ရှောင်ခိုင်းတာ မပာုတ်ပါဘူး။ အသင့်စား အစား အစာတွေ ဖြစ်တဲ့ ကြက်အူချောင်း၊ ဝက်အူချောင်း၊ ဝက်ပေါင်ခြောက်၊ အသင့်စား ခေါက်ဆွဲပြုတ်၊ အသင့်စား ဆန်ပြုတ် စတာတွေ ပာာ ဆားပမာဏ အရမ်းများတဲ့ အတွက် ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အထဲမှာပါပါတယ်။ သကြား ရှောင်ပါ။ ကလေးငယ်ငယ်တွေ အတွက် သကြားမလိုပါ။ ငယ်ငယ်လေး တည်း က သကြားကို အစပျိုးပြီး မကျွေးသင့်ပါ။ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ကလေးငယ်တွေ က […]
Posted in: Article, NutritionTagged: ဒေါက်တာ ညီညီကျော်LeaveacommentGood Health Journal	 December 2, 2017
Cranberry သီးကတော့ အခုနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ နဲ့ နည်းနည်းရင်းနှီးစ ပြုလာပါပြီ။ စူပါမားကတ်တွေမှာ ဆိုရင် အသီး အနေနဲ့ရော ဖျော်ရည် အနေနဲ့ပါ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရနေပါပြီ။ သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးပြုပုံ မပြောခင်မှာ ဘာတွေ ပါဝင်သလဲ ဆိုတာ အရင်ပြောချင်ပါတယ်။ Cranberry သီး တရုတ်ထမင်းဂပန်းကန်လုံး တဝက်မှာ ဆိုရင် 25 ကယ်လိုရီ ပဲရှိပြီး အခြားသော အာပာာရဓါတ်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ 1. အမျှင်ဓါတ် 2. ကယ်ဆီယမ် 3. သံဓါတ် 4. မဂ္ဂနီဆီယမ် 5. Phosphorus 6. ပိုတက်ဆီယမ် 7. ဆိုဒီယမ် 8. ဇင့်ဓါတ် 9. ဖောလိတ် 10. ဗီတာမင် […]
Posted in: Article, NutritionTagged: ဒေါက်တာ ညီညီကျော်LeaveacommentGood Health Journal	 November 30, 2017
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ ထမင်းစားရင် ဖွေးနေမှ ဖြူနေမှ ဆိုပြီး ရေအထပ်ထပ်ဆေး ဆန်ဖွတ်ကတည်းက ဖြူဖွေးတဲ့ အဆင့်ထိ ဖွတ်လိုက်တော့ နဂိုဆန်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် နှင့် သတ္တုဓါတ်တွေ ဆုံးရှုံးကုန်ပါတယ်။ မပါသလောက်ကို ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု နောက်ပိုင်း ဆန်တွေမှာ ဗီတာမင် တွေ ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့ အားဖြည့်ဆန် (Fortified Rice) တွေ ထုတ်လာကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ လို ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ဖြစ်သေးတဲ့ အာပာာရဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ဗပာုသုတ နည်းနေသေးတဲ့ နိုင်ငံ တွေ မှာ အခုလိုမျိုး အားဖြည့်ဆန်တွေ ထုတ်လာကြတာ တော်တော် လေး ကောင်းကျိုးတွေရှိပါတယ်။ အားဖြည့်ဆန် မှာ ဘာတွေပါလဲ???? ဗီတာမင် အေ […]
Posted in: Article, Health Tips, Medical Knowledge, NutritionTagged: ဒေါက်တာ ညီညီကျော်LeaveacommentGood Health Journal	 November 11, 2017